Ukukhethwa okuhle kakhulu kwamanoveli obugebengu
Ukubuyekezwa kwenoveli yobugebengu
Omama, nguCarmen Mola
Umzuzu wesinqumo sokugcina ufika kuCarmen Mola. Ngabe uzoyilandela indlela yempumelelo noma abalandeli bakhe bazomshiya uma sekutholakele ukuthi unamakhanda amathathu? Noma…, ngokuphambene nalokho, ingabe wonke umsindo odalwe umsuka noma cha wababhali abathathu ngemuva kwegama mbumbulu ku...
Wonke Amahlobo Aphela, nguBeñat Miranda
I-Ireland iphathisa ihlobo layo ku-Gulf Stream ekwazi ukufinyelela kulawo ma-latitudes aseBrithani, njenge-spectrum engavamile yasolwandle, enamazinga okushisa amnandi kakhulu kunanoma yisiphi esinye isifunda endaweni. Kepha ungalenzi iphutha, lelo hlobo lase-Ireland nalo linohlangothi lwalo olumnyama phakathi kohlaza olungashi lwe…
Ilangabi lasePhocaea, lase Lorenzo Silva
Kufika isikhathi lapho ubuqambi bombhali buvezwa khona. okuhle kwe Lorenzo Silva kumnika ithuba lokwethula izinto ezintsha eziqanjiwe zomlando, ama-eseyi, amanoveli obugebengu neminye imisebenzi angayikhohlwa yokusebenzisana njengamanoveli akhe akamuva anezandla ezine noNoemi Trujillo. Kodwa akubuhlungu neze ukululama...
Yonke into iyasha, nguJuan Gómez-Jurado
Isisondeza ekushiseni okuzenzakalelayo ngokushisa okwenziwe igagasi lokushisa ngaphambi kwesikhathi, lokhu "Kusha Konke" ka-Juan Gómez-Jurado kuza ukuzominyanisa ubuchopho bethu nakakhulu ngesinye seziza zakho ezinezinhlangothi eziningi. Ngoba lokhu okwenziwa yilo mbhali ukunikeza i-protagonism eyabiwe ezakhiweni zakhe. Akukho okungcono kulokhu...
Isakhiwo sikaJean Hanff Korelitz
Ukuphanga phakathi nokugetshengwa. Ngamanye amazwi, angifuni ukusho ukuthi uJean Hanff Korelitz webe kuJoel Dicker ingxenye yengqikithi yakhe elandisayo kulowo Harry Quebert naye ontshontshe izinhliziyo zethu. Kodwa ukuqondana kwe-thematic kunalelo phuzu elihle lokuhlangana phakathi kweqiniso ...
I-Alaska Sanders Affair kaJoel Dicker
Kuncane okusele ukuthi sikwazi ukuzicwilisa ku-Joel Dicker entsha. Futhi lapho lokho kwenzeka ngizodlula ukuze ngichaze ngalokho engikufundile. Zisuka nje, i-Alaska Sanders Affair yethulwa kithi njengochungechunge. Kepha sesiyazi ukuthi uDicker ubachitha kanjani edala izindaba ezintsha…
Ukwethuka nguJames Ellroy
Okuthunyelwe okudingida umlando wokuphila komuntu noma okungenani umfanekiso wendima emhlabeni womlingisi ngokushintshana, kangcono ukuphathisa udaba kumbhali wezincwadi kunombhali womlando wokuphila kwabantu owaziwayo. Futhi akekho ongcono kunoJames Ellroy ukuthi alobe lawo mazwibela okuphila phakathi kwezibani ezithile nezithunzi eziningi… Mayelana…
Ingane, nguPablo Rivero
Indaba yamanethiwekhi omphakathi kanye nokulahlwa kwawo kwaqanjwa ngombono omusha. Ngoba akuyona yonke into engaba kwalasha ezinkundleni zokuxhumana. Eqinisweni, ngingathanda ukubona lo mhlaba wethu wamanje uvalelwe ngaphandle kwe-whatsapp embi esingaxoxa nayo eqenjini noma ...
Iphunga Lobugebengu nguKatarzyna Bonda
EPoland ngezinkulumo ze-noir indlalifa ezimpini ezishisayo noma njengesitsha esibandayo esanduleleni nokuphuma kweMpi Yezwe Yesibili, izwi elifana nelikaKatarzyna Bonda (eliqhathaniswa nelethu. Dolores Redondo), iqhuma ngamandla. Ukuqina okuphazamisayo kwalabo abanesibindi sokuxhumanisa...
Siqala ekugcineni, nguChris Whitaker
Kwesinye isikhathi uhlobo olumnyama luthatha incazelo ehambisana nekhona. Amacala afana nelika-Víctor del Arbol, okwazi ukujula okubi kakhulu kusukela ekuhlolweni kwabalingiswa bakhe. Kwenzeka okufanayo nalo mbhali, uChris Whitacker ofika nelinye iphuzu lokuxhumana ngokungangabazeki…
Passionate Dictionary of the Black Novel, nguPierre Lemaitre
Uhlobo lwe-noir namuhla lungenye yezisekelo eziqine kakhulu zemibhalo yesimanje. Izindaba zobugebengu noma ezingaphansi komhlaba, izindlela eziya emahhovisi amnyama alawula indle edumile, amaphoyisa noma abaphenyi abashiya isikhumba sabo ukuze baxazulule amacala aphazamisa kakhulu. Futhi uPierre Lemaitre ungomunye walabo ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi20 Okulandelayo →